သနပ္ပင်မြို့နယ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 17°17′39″N 96°33′48″E﻿ / ﻿17.29417°N 96.56333°E﻿ / 17.29417; 96.56333ကိုဩဒိနိတ်: 17°17′39″N 96°33′48″E﻿ / ﻿17.29417°N 96.56333°E﻿ / 17.29417; 96.56333
မွန်၊ ဗမာ၊ ကရင်
၁ ဒေသ သမိုင်း
၄ ရာသီဥတုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
၇ လူဦးရေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
သနပ်ပင်သည် ရှေးက သနပ်ပင် အများအပြား ပေါက်သော အရပ် ဖြစ်သည်။ သနပ်ပင်ကြီး နှစ်ပင်မှာမူ ပဲခူးမြို့ဘက်မှ မြင်နိုင်လောက်အောင် မြင့်မားသည် ဆို၏။ ကိုလိုနီခေတ်ဦးကာလက သစ်တောထူထပ်ပြီး၊ တဲငယ်လေးငါးလုံးသာ ရှိသည်။ ဗြိတိသျှအရာရှိများ အမဲလိုက် ထွက်ရာ နယ်မြေဟု ဆိုသည်။ အနီးဝန်းကျင်တွင် မွန်တိုင်းရင်းသား လယ်သမားများ ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်းကာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သည်။ ၁၉၀၈ ခုတွင် သနပ်ပင်ကျေးရွာဟူ၍ ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ ၆၈၅ ဦး နေထိုင်သည်။
သနပ်ပင်မြို့သို့ ပဲခူးမြို့မှ မော်တော်ကားလမ်းဖြင့် ဆက်သွယ်ထားကာ၊ ၇ မိုင် ဝေးသည်။
သနပ်ပင်မြို့သည် မြောက်လတ္တီကျု ၁၇ဒီဂရီ ၀၇မိနစ်မှ ၁၇ဒီဂရီ ၂၂မိနစ်နှင့် အရှေ့လောင်တီကျု ၉၆ဒီဂရီ ၃၀မိနစ်မှ ၉၆ဒီဂရီ ၅၅မိနစ်ကြားတွင် တည်ရှိပါသည်။ အရှေ့မှအနောက်သို့ ၃၅မိုင်၊ မြောက်မှ‌တောင်သို့ (၁၁)မိုင် ရှည်လျားပါသည်။[ကိုးကားချက်လိုသည်]
သနပ်ပင်မြို့နယ်၏ အရှေ့ဘက်တွင် မွန်ပြည်နယ်ရှိ စစ်တောင်မြစ်ခြားလျှက် ကျိုက်ထိုမြို့နယ်၊ ဘီးလင်းမြို့နယ်တို့နှင့် နယ်နမိတ်ထိစပ်လျက်ရှိပြီး တောင်ဘက်တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကဝမြို့နယ်နှင့် ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။ အနောက်ဘက်တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပဲခူးမြို့နယ်နှင့်လည်း‌ကောင်း၊ မြောက်ဘက်တွင် ဝေါမြို့နယ်နှင့်လည်းကောင်း နယ်နိမိတ်ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။ မြို့နယ်၏အ‌ရှေ့ဘက်သည် စစ်တောင်းမြစ်နှင့် ထိစပ်လျက်ရှိပြီး စစ်တောင်းမြစ်ဝကမ်းရိုးတန်းမိုင်မှာ ၁၆မိုင်ခန့်ဖြစ်ပါသည်။
သနပ်ပင်မြို့နယ် မြေနိမ့်ချိုင့်ဝှမ်းလွင်ပြင်‌ဒေသဖြစ်ပြီး ရေနက်ကွင်းများပေါများသည်။ မြို့နယ်၏ ၇၅ရာခိုင်နှုန်းမှာ ရေနက်ကွင်းဒေသများဖြစ်ပြီး မိုးတော်ရေတော် စပါးစိုက်ပျိုးဧက နည်းပါသည်။
သနပ်ပင်မြို့နယ်သည် အနောက်‌တောင် မုတ်သုံရာသီဥတုရရှိသည်။ ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် စုစုပေါင်းမိုးရေချိန် ၁၁၉.၅၁လက်မ ရရှိသည်။ နွေရာသီတွင်အမြင့်ဆုံးအပူချိန် ၃၇°C နှင့် ဆောင်းရာသီ၏အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်မှာ ၂၂°Cဖြစ်သည်။
သနပ်ပင်မြို့နယ်သည် မြေနိမ့်ဒေသပေါများသည့် အလျှောက် ရေဆူးပုပ်ပင်၊ ဆူးကသစ်ပင်၊ မန်ကျည်းပင်၊ ကုက္ကိုပင်၊ ဇီးပင်နှင့် ဖော့ညဏ်ပင်များ သဘာဝအလျောက် ပေါက်ရောက်လျက်ရှိပါသည်။ ရေလွတ်ရာနေရာများ၌ သရက်ပင်၊ အုန်းပင်၊ ထန်းပင်၊ မာလကာပင်နှင့် ငှက်ပျောပင် စသည့်အပင်များ ဖြစ်ထွန်းလေ့ရှိပါသည်။
သနပ်ပင်မြို့နယ်အတွင်း သဘာဝရာသီအလိုက် ကျေးငှက်သတ္တဝါ အမျိုးမျိုးဖြစ်သည့် ကြွက်၊ ဖား၊ လင်းမြွေ၊ ငါးရှဉ့်၊ ရေချို/ရေငံ ငါး၊ ပုစွန်၊ ဂဏန်းတို့တွေ့ရပါတယ်။ လယ်ယာသုံး ကျွဲ၊ နွားများနှင့် အိမ်မွေးသတ္တဝါများဖြစ်သော ကြက်၊ ဘဲ၊ ဝက်၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ ငုံး၊ ခွေးနှင့် ကြောင်များ မွေးမြူကြပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဘဲမွေးမြူခြင်းနှင့် ဘဲသားပေါက်လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပါသည်။
သနပ်ပင်မြို့သည် ကူးသန်းသွားလာရေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အဆင်ပြေသော မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပေသည်။ ပဲခူး - သနပ်ပင် မော်တော်ကားလမ်းသည် ရန်ကုန် - မန္တလေးမော်တော်ကား လမ်းမကြီး၏ လမ်းခွဲတစ် စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီကာလက ၄၉ မိုင်မျှသာရှည်သော ပဲခူး - သုံးခွ မီးရထားလမ်းသည် သနပ်ပင်မြို့ကို ဖြတ်သန်းသွားသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ကာလအတွင်းမှစ၍ မီးရထားလမ်းကို ပိတ်ထား ခဲ့ရာ ယခုအခါ ယင်းကို ပဲခူးမှ ခရမ်း၊ သုံးခွအထိ လမ်းပေါက်သော မော်တော်ကားလမ်းအဖြစ်သို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဖောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ထို လမ်းသည် ပဲခူးခရိုင်နှင့် ဟံသာဝတီခရိုင်တို့၏ ကူးသန်းသွားလာရေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လွယ်ကူကောင်းမွန်စေသည်။
ရေလမ်းခရီးဘက်တွင် မိုင် ၃ဝ ရှည်လျားသော ပဲခူး-စစ်တောင်းတူးမြောင်းသည် သနပ်ပင်မြို့လယ်ကို ဖြတ်သန်းသွားလေသည်။ မြို့တစ်ဖက်ကမ်းနှင့် တစ်ဖက်ကမ်း ကူးသန်းနိုင်ရန် ပေ ၁၂ဝ ရှည်သောတံတားကို ၁၉ဝဝ ပြည့်နှစ်တွင် လမ်းဌာနက ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုတူးမြောင်းသည် ယခင်က လှေ၊ သမ္ဗန်မှစ၍ တုံကင်းကြီးများအထိ သွားလာနိုင်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ကောလာသဖြင့် လှေ၊ သမ္ဗန် ဘောက်တူနှင့် ကူးတို့ မော်တော်ကလေးများသာ သွားလာနိုင်သည်။ ဗြိတိသျှလက်ထက်က ပျဉ်းမနား၊ တောင်ငူ၊ လယ်ဝေး၊ ရွှေကျင် နယ်များဘက်မှ ကျွန်းသစ်များကို ထိုတူးမြောင်းအားဖြင့် မျှောချခဲ့လေသည်။ ထို့ပြင် ပဲခူးခရိုင်အတွင်း ကျေးရွာပေါင်း ၃ဝဝ ကျော်တို့မှ ဆန်စပါး၊ ထင်း၊ ဝါး၊ ဓနိ၊ စဉ့်အိုးနှင့် ကုန်စိမ်းပစ္စည်းများကိုလည်း ထိုတူးမြောင်းဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုမှတစ်ပါး အခြားချောင်းကြီး ချောင်းငယ်တို့ဖြင့် ဟံသာဝတီခရိုင်သို့၎င်း၊ သထုံခရိုင်ဘက်သို့၎င်း ကူးသန်းသွားလာနိုင်သည်။ သနပ်ပင်မြို့နယ်သည် ပဲခူးခရိုင်၏ မြေနိမ့်မြေပြန့်ပိုင်းကျသော မြို့နယ်ဖြစ်သည်။ ၁၉၃၁ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ မြို့နယ်၏ အကျယ်အဝန်းသည် ၃၄၁ စတုရန်းမိုင်ဖြစ်၍ သူကြီးတပိုင်ကျေးရွာ အစုပေါင်း ၅၁-ခုပါဝင်သည်။ မြို့နယ်အတွင်း အိမ်ခြေ ၁ဝ,၆၄၇ အိမ်ရှိ၍ လူဦးရေသည် ။
သနပ်ပင်မြို့နယ်တွင် ဗမာလူမျိုး ၁၅၉၄၁၂ဦး နေထိုင်၍ မြို့နယ်လူဦးရေ၏ ၉၆.၁၈၃% ဖြစ်သည်။ မွန်၊ကရင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး အနည်းငယ်သာနေထိုင်သည်။
ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင် သခင်ချစ်
ဪခေတ် (သနပ်ပင်) (စာရေးဆရာ)
↑ National Telephone Area Codes။ Myanmar Yellow Pages။
↑ တင်နိုင်တိုး (ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၁၃). မြန်မာပြည်တစ်ခွင် လမ်းညွှန်. မဇ္ဈိမစာပေ, ၇၉။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သနပ္ပင်မြို့နယ်&oldid=553947" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၉:၅၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။